Xildhibaan Prof. Gaandi oo wareysi siiyey Somalichannel TV-VIDEO
Talaado, 05 Maarso 2013 08:35 | Qoraaga: Tafatiraha | Prof. Maxamed Cabdi Gaandi ayaa ka sheekeeyey sidii ay ku aasaaseen ciidamada xorreeyey gobollada jubbooyinka iyo Gedo, wuxuuna sheegay in dhibaatooyinka ugu waaweyn Soomaaliya meelaha ay ka jiraan ay kamid tahay jubbooyinka Soomaaliya. Dadka dhibaatada ku hayey gobolladan ayuu sheegay inay ahaayeen dad ka yimid kor oo aan deegaanka aheyn.
Waxaa jirey ururo banaanka ka ahaa qorshahaanagii oo aan isku biirnay maantana waxaan wadajoognaa Kismaayo. Dim lights
Waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u sheego in dadka sameysanaya maamulka ay yihiin dadkii deegaanka waana rabitaan dadka deegaanka ka yimid.
Dowladda Soomaaliyeed waxaad moodaa inay fasiraad saxa aysan ka bixineynin barnaamijkan, markiila dhisay dowladda cusub wafti guddi ah oo aan kamid ahaa la diray oo waxaan tagnay Xanmar 8 cisho ayaan joognay Xamar waanan kasoo tagnay, wafti kale ayaa loo diray sidoo kale.
Markii dambe IGAD ayaa loo igmaday wixii farsamo ah dowladduna shirka hoggaamiso, waxaa kale oo aan ognahay dhibaatooyinka ka socda Kismaayo inay ka dambeyso dowladda oo Xamar lacago looga soo diro, Gedo ay lacago u dirto si ay u carqaladeeyaan shirka.
Dowladdu waxay boreseeskan u fasireysaa inuu reer-yahay. Dowladdu waxay dirtay dhaqaale waxaana caddeynaya hadalada masuuliyiinta sida hadalkii madaxweynaha laba qabiil ama laba gobol.
Dowladda shirka noo fura ayaa la yiri marki ay Kismaayo yimaadeen, umaanan soconin ayey yiraahdeen, kadibna ra`iisul wasaaraha ayaa hadlay.
Doladdu weligeed nooma sheegin halkaas buu barnaamijkiinu ka khaldan yahay idaaacdaha ayaa lagu wada hadlaa taasina waxaan u arkaa khalad.
Kenya dowlad nooma dhisayso IGAD maamul nooma dhisayso annaga ayaa dhisaneynna maamul gobolleedka jubaland state. Shirku ma billaaban wuxuu billaaban doonaa marka ay ergooyinku tagaan, masuuliyiintii iyo odayaashiina ay tagaan, weli lama furin shirka.
Anigu hadda Nairobi ayaan joogaa shirka in la furo waxba kama qabo.
Azania way joogtaa shirka, ururadii kale ee aanu midownay way joogaan waxaanan sugeynaa Gedo oo aan aniguba rabay inaan isa-sii-raacno. Intaasi waxay ka mid ahaayeen hadalladi prof. Gaandi, dhageyso si aad u dhammeysato wareysiga prof. Gaandi oo ah aas-aasihii barnaamijka lagu xoreeyey jubbooyinka iyo Gedo isla markaana lahaa fikirka Jubaland State.